Usarega Rudo Rwako Ruchitonhora—Mateu 24:12 | Yokudzidza
“Rudo rwevazhinji ruchatonhora nokuda kwokuwedzera kwokusateerera mutemo.”​—MAT. 24:12.
NZIYO: 38, 128
Tingaitei kuti kuda kwatinoita Jehovha kurambe kwakasimba?
Tingawedzera sei kuda kwatinoita chokwadi cheBhaibheri?
Nei zvichikosha kuti tide hama dzedu?
1, 2. (a) Mashoko aJesu ari pana Mateu 24:12 akatanga kushanda kuna ani? (b) Bhuku raMabasa rinoratidza sei kuti vaKristu vakawanda vepakutanga vakaramba vachiratidza rudo? (Ona mufananidzo uri panotangira nyaya ino.)
CHIMWE chezvinhu zvakataurwa naJesu chaizoratidza ‘kuguma kwemamiriro ezvinhu’ chaiva chekuti “rudo rwevazhinji [rwaizotonhora].” (Mat. 24:3, 12) Panguva yevaKristu vepakutanga, vaJudha vaizviti vanhu vaMwari vakarega kuda kwavaiita Mwari kuchitonhora.
2 Asi vaKristu vakawanda panguva iyoyo vakaramba ‘vachizivisa mashoko akanaka pamusoro paKristu Jesu,’ uye vakaramba vachida Mwari, vamwe vaKristu nevanhu vainge vasiri vatendi. (Mab. 2:44-47; 5:42) Kunyange zvakadaro, vamwe vateveri vaJesu vepanguva iyoyo vakarega rudo rwavo ruchitonhora.
3. Chii chingangodaro chakaita kuti rudo rwevamwe vaKristu rutonhore?
3 Jesu Kristu, uyo akanga amutswa, akaudza ungano yevaKristu vepakutanga vaigara muEfeso kuti: “Ndinopesana newe pachinhu ichi, kuti wakasiya rudo rwawaiva narwo pakutanga.” (Zvak. 2:4) Ndechipi chimwe chezvikonzero zvingangodaro zvakaita kuti rudo rwavo rutonhore? Vadzidzi vaKristu ava vepakutanga vangangodaro vakakanganiswa nenyika yaiita zvinodiwa nenyama. (VaEf. 2:2, 3) Sezvakangoita maguta akawanda mazuva ano, guta reEfeso rakanga rakazara neuipi. Rainge rakapfuma chaizvo uye vanhu vaivamo vaikoshesa zvinhu zveumbozha, mafaro uye upenyu hwemutambarakede. Kunyanya kuda mafaro kwaiita kuti vanhu vacho vasava nerudo. Uyewo maitiro ekushaya nyadzi neunzenza hwakanyanyisa zvakanga zvakazara.
4. (a) Rudo rwevanhu ruri kuwedzera sei kutonhora mazuva ano? (b) Ndepapi patinofanira kuita kuti rudo rwedu rurambe rwakasimba?
4 Uprofita hwaJesu hunotaura nezvekupera kwerudo huri kuzadzikawo mazuva ano. Vanhu vari kuwedzera kusada Mwari. Vakawanda havachavimbi naMwari asi vava kuvimba nemasangano evanhu kuti agadzirise matambudziko avo. Saka rudo rwevanhu vasinganamati Jehovha Mwari ruri kuramba ruchiwedzera kutonhora. Kunyange vaKristu vechokwadi mazuva ano vanogonawo kuvarairwa vorega rudo rwavo ruchitonhora, sezvakaitika muungano yeEfeso. Iye zvino tichakurukura nezvepatinofanira kuramba tichisimbisa rudo rwedu: (1) Kuda Jehovha, (2) kuda chokwadi cheBhaibheri, uye (3) kuda hama dzedu.
5. Nei tichifanira kuda Mwari?
5 Musi waakanyevera nezvekupera kwerudo, Jesu akanga ambotaura nezverudo runokosha kupfuura rumwe rwese. Akati: “‘Ida Jehovha Mwari wako nomwoyo wako wose nomweya wako wose nepfungwa dzako dzose.’ Uyu ndiwo murayiro mukuru pane yose uye wokutanga.” (Mat. 22:37, 38) Saka kuda Mwari zvakadzama kunotibatsira kuti titeerere mirayiro yaJehovha, titsungirire uye tivenge zvakaipa. (Verenga Pisarema 97:10.) Zvisinei, Satani nenyika yake vari kuedza kuparadza kuda kwatinoita Mwari.
6. Chii chinoitika vanhu pavanorega kuda Mwari?
6 Vanhu vari munyika “vanozvida” pane kuti vade Musiki. (2 Tim. 3:2) Nyika ino iri kutongwa naSatani inokurudzira “kuchiva kwenyama nokuchiva kwemaziso nokushamisira nezvinhu zvoupenyu zvomunhu.” (1 Joh. 2:16) Muapostora Pauro akanyevera vaKristu nezvekufadza nyama achiti: “Kufunga kwenyama kunoreva rufu . . . nokuti kufunga kwenyama kunoreva kuvengana naMwari.” (VaR. 8:6, 7) Vaya vanoraramira kutsvaga zvinhu kana kugutsa zvido zvavo zvebonde vanopedzisira vaora mwoyo uye vanorwadziwa zvikuru.​—1 VaK. 6:18; 1 Tim. 6:9, 10.
7. Ingozi dzipi dzinosangana nevateveri vaKristu mazuva ano?
7 Mune dzimwe nyika, vaya vanoti hakuna Mwari, vaya vanoti hatikwanisi kuziva kuti ariko here kana kuti kwete, uye vaya vanotenda kuti zvinhu zvakashanduka-shanduka vanosimudzira pfungwa dzinoita kuti vanhu vasada Mwari uye vasatenda maari. Vanhu ava vanoita kuti vanhu vakawanda vafunge kuti munhu anotenda kuti kune Musiki akapusa kana kuti haafungi. Panguva imwe chete, nyanzvi dzesainzi dzinoremekedzwa chaizvo uye izvozvo zvinoita kuti vanhu vasafunga nezveMusiki wedu. (VaR. 1:25) Kana tikateerera zvinhu zvavanodzidzisa, zvishoma nezvishoma tinogona kubva pana Jehovha uye rudo rwedu rungatonhora.​—VaH. 3:12.
8. (a) Vanhu vaJehovha vakawanda vari kusangana nezvinhu zvipi zvinoodza mwoyo? (b) Ivimbiso ipi yatinowana muPisarema rechi136?
8 Munyika ino yakaipa iri kutongwa naSatani, tese tinombosangana nezvinhu zvinotiodza mwoyo. (1 Joh. 5:19) Asi kana tikanyanya kuora mwoyo kutenda kwedu kunogona kupedzisira kusisina kusimba zvoita kuti kuda kwatinoita Mwari kutonhore. Zvimwe panguva ino tine matambudziko anokonzerwa nekukwegura, kurwara kana kushaya mari. Kana kuti tingarwadziwa nekuti hatisi kukwanisa kuita zvimwe zvinhu sezvatinoshuwa kuita. Tinogona kuora mwoyo nekuti pane zvimwe zvinhu zvisina kuitika sezvataitarisira. Asi hatitombofaniri kurega zvinhu zvakadaro zvichiita kuti tifunge kuti Jehovha atisiya. Panzvimbo pezvo, tinofanira kufungisisa nezvemashoko anoratidza kuti Jehovha acharamba achitida. Tinowana mashoko akadaro pana Pisarema 136:23 iyo inoti: “Iye akatiyeuka patakanga takaderera: Nokuti [rudo rwake rwakavimbika runogara] nokusingagumi.” Rudo rwakavimbika rwaJehovha haruchinji. Saka tinogona kuva nechokwadi chekuti anonzwa ‘kuteterera kwedu’ uye anotipindura.​—Pis. 116:1; 136:24-26.
9. Chii chakapa Pauro simba rekuti arambe achida Mwari?
9 Kufanana nemunyori wepisarema, Pauro akasimbiswa nekufunga nezvekutsigirwa kwaakaitwa naJehovha. Pauro akanyora kuti: “Jehovha ndiye mubatsiri wangu; handingatyi. Munhu angandiitei?” (VaH. 13:6) Chivimbo ichocho chekuti Jehovha aiva nehanya naye chakabatsira Pauro kuti akwanise kurwisana nematambudziko eupenyu. Haana kurega matambudziko achimutadzisa kuvimba naJehovha. Paaiva mujeri, Pauro akatonyora tsamba dzakawanda dzinokurudzira. (VaEf. 4:1; VaF. 1:7; Fir. 1) Kunyange paakasangana nemiedzo yakaoma, Pauro akaramba achida Mwari. Chii chakamupa simba rekuti adaro? Akaramba achivimba ‘naMwari wokunyaradza kwose, uyo anotinyaradza pakutambudzika kwedu kwose.’ (2 VaK. 1:3, 4) Tingatevedzera sei muenzaniso waPauro toita kuti kuda kwatinoita Jehovha kurambe kwakasimba?
Ratidza kuti unoda Jehovha (Ona ndima 10)
10. Tingaitei kuti kuda kwatinoita Jehovha kurambe kwakasimba?
10 Imwe nzira inokosha yekuita kuti kuda kwatinoita Jehovha kurambe kwakasimba yakataurwa naPauro pachake. Akanyorera vaainamata navo kuti: “Rambai muchinyengetera.” (1 VaT. 5:17; VaR. 12:12) Kunyengetera kunoita kuti tive neushamwari hwepedyo naMwari. (Pis. 86:3) Patinonyatsotora nguva yedu tichidurura zviri pasi pemwoyo yedu kuna Jehovha, tichatoswedera pedyo naBaba vedu vekudenga, “Munzwi womunyengetero.” (Pis. 65:2) Uyewo, patinoona Jehovha achipindura minyengetero yedu, tinowedzera kumuda. Tinosvika pakuona kuti “Jehovha ari pedyo navose vaya vanodana kwaari.” (Pis. 145:18) Chivimbo ichocho chekuti Jehovha anotitsigira chichatibatsira kutsungirira miedzo yekutenda.
KUDA CHOKWADI CHEBHAIBHERI
11, 12. Tingaitei kuti tiwedzere kuda chokwadi cheBhaibheri?
11 SevaKristu, tinokoshesa uye tinoda chokwadi. MuShoko raMwari ndimo munobva chokwadi. Achinyengetera kuna Baba vake, Jesu akati: “Shoko renyu ichokwadi.” (Joh. 17:17) Saka kuda chokwadi kunotanga nekuwana zivo yakarurama yeShoko raMwari. (VaK. 1:10) Zvisinei, kungova nezivo chete hakuna kukwana. Ona kuti munyori wePisarema rechi119 anotibatsira sei kunzwisisa zvinorehwa nekuda chokwadi cheBhaibheri. (Verenga Pisarema 119:97-100.) Zuva zvarinenge richifamba, tinowana here nguva yekumbofungisisa zvatinoverenga muBhaibheri? Kukoshesa kwatinoita chokwadi cheBhaibheri kuchawedzera patinofungisisa nezvekubatsirwa kwatinoitwa kana tikachishandisa muupenyu hwedu.
12 Munyori wepisarema akazotiwo: “Zvamunotaura zvave [zvichitapira] sei mukanwa mangu, kupfuura zvinoita uchi mukanwa mangu!” (Pis. 119:103) Mabhuku atinopiwa nesangano raMwari akaita sezvekudya zvinonaka. Patinodya zvinhu zvatinofarira, tinogona kuzviita tisingamhanyi-mhanyi kuti tinakirwe nazvo. Saizvozvowo, tinoda kutora nguva yedu tichidzidza. Kana tikadaro, tichanakirwa ‘nemashoko anofadza’ echokwadi uye zvichava nyore kuti tiyeuke zvatinoverenga tozvishandisa pakubatsira vamwe.​—Mup. 12:10.
13. Chii chakabatsira Jeremiya kuti ade chokwadi cheMagwaro uye izvozvo zvakaita kuti aitei?
13 Muprofita Jeremiya aida chokwadi cheMagwaro. Ona kuti mashoko aMwari akabaya sei mwoyo wake. “Mashoko enyu akawanikwa, ndikaadya; uye kwandiri shoko renyu rinova kupembera nomufaro uye kufara kwomwoyo wangu; nokuti ndanga ndichishevedzwa nezita renyu, haiwa Jehovha Mwari wemauto.” (Jer. 15:16) Jeremiya aifungisisa mashoko anokosha aMwari uye aiada. Izvozvo zvakaita kuti anyatsokoshesa ropafadzo yaaiva nayo yekushevedzwa nezita raMwari. Kuda kwatinoita chokwadi cheBhaibheri kuri kuita here kuti tione ropafadzo inokosha yatiinayo yekushevedzwa nezita raMwari uye yekuzivisa Umambo hwake panguva ino yemugumo?
Ratidza kuti unoda chokwadi cheBhaibheri (Ona ndima 14)
14. Chii chimwe chatingaita kuti tiwedzere kuda kwatinoita chokwadi cheBhaibheri?
14 Kunze kwekuverenga Bhaibheri nemabhuku anoritsanangura, chii chimwe chatingaita kuti tiwedzere kuda kwatinoita chokwadi cheBhaibheri? Tinogona kuwedzera kuda kwatinoita chokwadi cheBhaibheri kuburikidza nekugara tichipinda misangano yeungano. Kudzidza kwatinoita Bhaibheri vhiki nevhiki tichishandisa Nharireyomurindi ndiyo nzira huru inoshandiswa pakutidzidzisa. Kuti tinzwisise nyaya inenge ichidzidzwa, tinofanira kunyatsogadzirira Chidzidzo cheNharireyomurindi chimwe nechimwe. Imwe nzira yatinogona nayo kuita izvi ndeyekuverenga magwaro ese ari munyaya yacho. Mazuva ano Nharireyomurindi inogona kudhaunirodhwa pajw.org kana kuverengwa paJW Library app mumitauro yakawanda. Dzimwe mhando dzemafaira dzinoita kuti tikwanise kuvhura magwaro acho nekukurumidza munyaya imwe neimwe yekudzidza. Asi pasinei nezvatingashandisa, kuverenga magwaro aya uye kufungisisa zviri maari kuchaita kuti tiwedzere kuda kwatinoita chokwadi cheBhaibheri.​—Verenga Pisarema 1:2.
KUDA HAMA DZEDU
15, 16. (a) Maererano naJohani 13:34, 35, tinofanira kuitei? (b) Kuda hama dzedu kwakabatana papi nekuda kwatinoita Mwari uye Bhaibheri?
15 Pausiku hwake hwekupedzisira ari panyika, Jesu akaudza vadzidzi vake kuti: “Ndiri kukupai murayiro mutsva, kuti mudanane; sokuda kwandakakuitai, kuti nemiwo mudanane. Vose vachaziva kuti muri vadzidzi vangu neizvi, kana muine rudo pakati penyu.”​—Joh. 13:34, 35.
16 Kuda kwatinoita hama nehanzvadzi dzedu kwakabatana nekuda kwatinoita Jehovha. Hatikwanisi kuda hama dzedu kana tisingadi Mwari. Muapostora Johani akanyora kuti: “Uyo asingadi hama yake, yaakaona, haangavi achida Mwari, waasina kumboona.” (1 Joh. 4:20) Uyewo, kuda kwatinoita Jehovha nehama dzedu kwakabatana nekuda kwatinoita Bhaibheri. Nei zvakadaro? Nekuti kuda kwatinoita chokwadi cheBhaibheri kunoita kuti titeerere nemwoyo wese mirayiro iri muMagwaro yekuti tide Mwari uye tide hama dzedu.​—1 Pet. 1:22; 1 Joh. 4:21.
Ratidza kuti unoda hama nehanzvadzi (Ona ndima 17)
17. Ndedzipi dzimwe nzira dzatingaratidza nadzo kuti tinoda hama dzedu?
17 Verenga 1 VaTesaronika 4:9, 10. Zvii zvatingaita kuti tiratidze kuti tinoda vamwe vari muungano medu? Imwe hama kana hanzvadzi yakwegura inogona kunge isina anoitakura kuenda kumisangano yechiKristu. Imwe chirikadzi inogona kunge ichida kubatsirwa kugadziridza zvimwe zvinhu pamba payo. (Jak. 1:27) Hama nehanzvadzi dzakaora mwoyo kana kuti dziri kusangana nemamwe matambudziko dzinoda kubatsirwa, kukurudzirwa uye kunyaradzwa nesu. (Zvir. 12:25; VaK. 4:11) Tinoratidza kuti tinoda hama dzedu zvechokwadi kuburikidza nekutaura uye kuita zvinhu zvinoratidza kuti tine hanya ‘nevaya vane ukama nesu mukutenda.’​—VaG. 6:10.
18. Chii chichatibatsira kuti tigadzirise kusanzwisisana kwatingaita nevatinonamata navo?
18 Bhaibheri rakataura kuti “mumazuva okupedzisira” vanhu vakawanda vaizongofunga zvakavanakira chete uye vaizova nemakaro. (2 Tim. 3:1, 2) Saka sevaKristu tinofanira kushanda nesimba kuti tiwedzere kuda Mwari, chokwadi cheBhaibheri uye hama dzedu. Ichokwadi kuti dzimwe nguva tingasanzwisisana nevatinonamata navo. Asi nemhaka yekuti tinodanana, tichaedza kugadzirisa chero kusanzwisisana kunenge kwamuka nemutsa uye nekukurumidza. (VaEf. 4:32; VaK. 3:14) Saka ngatisamborega rudo rwedu rwuchisvika pakutonhora. Pane kudaro, ngatirambei tichinyatsoda Jehovha, Shoko rake uye hama dzedu.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Usarega Rudo Rwako Ruchitonhora